Monday November 19, 2018 - 16:49:11 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Xoogaga Al shabaab ee ka dagaalanta waddamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa wali khatar dhab ah waxa ay ku hayaan ammaanka waddamada Somalia iyo Kenya iyo guud ahaan waddamada geeska Africa sida lagu sheegay war bixin ay soo saartay hey'adda QM u q
Xoogaga Al shabaab ee ka dagaalanta waddamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa wali khatar dhab ah waxa ay ku hayaan ammaanka waddamada Somalia iyo Kenya iyo guud ahaan waddamada geeska Africa sida lagu sheegay war bixin ay soo saartay hey'adda QM u qaabilsan dhanka daba galka (Monitoring Group).
hey’adda ayaa sidoo kale ka digtay qataraha qarsoon ee ay Al Shabaab ku haayaan gobolka geeska Africa waxa ayna sheegtay in kaliya aysan muhiim aheyn in laga cirib tiro Soomaaliya ee ay muhiim tahay in laga cirib tiro guud ahaan gobolka geeska Africa.
Ciidamada Al Shabab ayaa wali khatar ku ah nabadda, amniga, iyo xasiloonida Soomaaliya waxaana saameynteeda laga dareemay xuduudaha dhulka miyiga ah waxa ayna kooxda Monitoring Group ku baaqday in loo baahan yahay feejignan dheeri ah laga galo garabka Alqaacidda ee Soomaaliya.
Warbixinta Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa hoos u dhigtay hoos u dhac ku yimid wadahadalka lala galayo Xarakada Al shabaab, maadaama marar badan lagu guul dareystay.
Kooxda dabagalka ayaa sidoo kale sheegtay in khilaafka u dhaxeeya Soomaliland iyo Puntland khasaarinta ilaha dhaqaalaha iyo burcad badeednimada ay tahay dhibaato aad u weyn.
Qubarada ayaa soo hadal qaday in hubka ku jira gacmaha ciidamada ee lagu taageerayo howgallada Somalia sida howlgalka Amisom iyo howgalka Mareykanka lagu wareejiyo Hogaanka Al Shabaab.
Kooxda Monitoring Group oo uu hogaaminayo James Smith ayaa sidoo kale ka digtay xadgudubyada xayiraadda ganacsiga dhuxusha, iyagoo ku tilmaamay ilaha ugu muhiimsan ee ay dhaqaalaha ka helaan Xarakada Al-Shabaab ee gacan saarka la leh Amiirka ALqaacidda Ayman adawaahiri.
November 7-deedii ee bishan ayey kooxdu sheegtay in Al Shabaab ay u dhuxul badan u dhoofiyaan waddanka Oman waxaana ay sheegtay in dhuxushaas laga dhoofiyo gobollada jubbooyinka, iyadoo lagu keydiyo dakadaha Kismaayo iyo Buur Gaabo ee gobaladaasi.
Monitoring Group ayaa qiyaastay in canshuurta halkii kiish oo dhuxul ah ay gaareyso 257 shilling oo lacagta Kenya ah isla markaana ay Al Shabab sanadkii dhoofinta dhuxusha ka helaan lacago fara badan oo gaaraya 1 billion oo lacagta Kenya.
Inkastoo loo diiday fursad ay ku qaadaan sawirada hubka la qabtay, kooxda uu hogaamiyo Smiths ee Monitoring Group ayaa sheegtay in ay heshay warar sheegaya in inta badan qalabka milatari ee ay qabteen AMISOM iyo ciidamada kale ee la dagaallama al-Shabaab, uu ka yimid waddanka Yemen.
Sido kale kooxda ayaa sheegtay in hubka la qabtay uu kamid ahaa hub lagu farsameeyey India loona keenay dowladda Kenya Bishii June 2008.
Monitoring Group ayaa sidoo kale xustay in Puntland ay wali tahay meesha ugu horeysa ee hubka sharci darrada ah uu kasoo galo Somalia, iyadoo hubkas laga keeno waddanka Yemen.
Xarakada Al shabaab ee tabacsan Alqaacidda ayaa dagaal kula jirta mudo ku siman 10 Sano Ciidamada dowladdaha Kenya, Ugandha, Burundi, Jabuuti, Nayjeria, iyo Military-ga dowlada Itoopiya.